Wararka – Page 22 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
DFS oo sheegtay in Soomaaliya aysan ka jirin walaac laga qabo Cudurka Ebola
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya oo ka Jawaab celineysa dareenka Bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan xannuunka Ebola ee laga helay dalka Yugaandha. Wasiirka Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya Drs. Fowsiya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in Soomaaliya aysan ka jirin xilligaan walaac ku aaddan inuu ka dilaaco Cudurka Eboola oo kiis ka mid ah laga helay Dalka Yugaandha.
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhurnimo Axad ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 16-06. 2019
Dowladda Turkey-ga oo Cambaareysay Qaraxyadii Ka Dhacay Magaaladda Muqdisho
Dowladda Turkey ga ayaa cambaareysay weeraradii shalay ka dhacay magaaladda Muqdisho oo ay ku dhinteen 8 ruux. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkey ga ayaa ku sheegay qoraal uu soo saaray in dowladda Turkeyga uu soo gaaray khabar xun oo sheegaya in weerar argagixiso oo si gar darro ah looga fuliyey Muqdisho uu dhaliyey tiro dhimasho iyo dhaawac ah. “Waxaan ...
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa booqasho dhiirri gelin ah ugu tegay ciidamada ammaanka ee shalay ka hor tegay laba weerar oo argagaxisadu doonayeen in ay dhibaatooyin xooggan ugu gaystaan ummadda Soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ciidamada ugu tegay baraha ay ku sugnaayeen ayaa ku ammaany feejintaanta ay ka qabaan dhagaraha cadawga, waxa ...
Madaxweynihii Hore ee Suudan Albashiir oo La Shaaciyay Xiliga La Maxkamadeynayo
Madaxweynihii hore ee dalka Suudan Omar Hassan Albashiir ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socdo lasoo taago maxkamadd sida uu sheegay xeer ilaaliyaha dalka Sudan. Alwaleed Sayed Axmed ayaa laba bilood kadib afgambigii Albashiir ku dhawaaqay in lasoo taagayo maxkamad maadaama uu wajahayo eedeymo musuq ah. Ciidamada military ga ah ee dalka Sudan ayaa bishii April afgambi ku sameeyey taliskii ...
Meydkad Askar Kenyaan ah oo ay Dileen Shabaab oo La Gaarsiiyay Wajeer
Ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan police-ka Kenya ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday miino la dhigay waddada dhinaceeda oo haleelay gaari ay la socdeen. Weerarkan lala beegsaday ciidamada Kenya ayaa ka dhacay meel u dhow xadka ay wadaagaan dalalka Somalia iyo Kenya. Gaariga uu qaraxa haleelay ayaa ku safraayey bariga Wajir, waxaana saarnaa ilaa iyo 11 ruux. Guddoomiyaha ...
Jubbland oo Fariin u Dirtay shaqsiyaadka Ka Shaqeeya Kicinta Bulshada
War-saxafadeed kasoo baxay Xafiiska xeer ilaaliyaha Guud ee Jubbaland ayaa loogu digay cid walba oo ku lug leh falal la xiriira kicinta bulshada iyo ka been abuurka laamaha ammaanka Jubbaland.
Shacabka Muqdisho oo Looga Digay in guryaha ka Kireeyaan Shabaab+Dhageyso
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa digniin u jeediyay shacabka magaaladda muqdisho ku nool. Bashiir Cabdi Maxamed (Ameerika) Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa shacabka ugu digay in guryaha ka kireeyaan xubno shabaab ka tirsan. Waxa uu sheegay Taliyaha in Ciidamadda amaanka ay dagaal kula jiraan shabaab,sidaas darteed loo baahan yahay in aan lasoo dhaweysanin. Dhanka kale ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Axad ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 16-06. 2019
Shabaab oo Sheegay in Silsilado Qaraxyo iyo Weeraro ay u Diyaariyeen Muqdisho
Xarakadda Al-shabaab ayaa sheegatay qaraxyo magaaladda Muqdisho Duhurnimadii maanta ka dhacay. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay isgoyska Sayidka oo laga ilaaliyo Madaxtooyadda Soomaaliya,iyo xarunta baarlamaanka Soomaaliya waxaana loo adeegsaday gaari Suruf. Sida ay xaqiijiyen booliska Soomaaliya, gaariga qarxay ayaa waxaa eryanayay Ciidamadda booliska Dowladda Soomaaliya,balse si iskiis ayuu u qarxay. Dhanka kale qarax labaad ayaa ka dhacay isla waqtigaas Naxaawiga KM4 ...
Page 22 of 1,830« First...10«2021222324	»	304050...Last »